ချစ်ကြည်အေး: ကောင်းနေသေးသော အဟောင်းများ...
ဒီနေ့မနက် ရုံးအသွားလမ်းမှာ တယောက်တည်း ပြုံးစိ ပြုံးစိနဲ့ ၊ တခုခုကို သတိရနေပြီး
မျက်နှာပိုးသတ်လို့ မရနိူင် ဖြစ်နေတာ။ သိချင်နေပြီ မဟုတ်လား ပြောပြမယ်လေ...ဒီလို...
တရက် ကျမ ရုံးအသွား Old Chang Kee မှာ မနက်စာ ဝင်ဝယ်ပြီး ဖစ်ရ်ှဘောလ် တုတ်
ထိုးတချောင်း လက်ကကိုင်စားလာတယ်။ အဲဒီမှာ အနောက်က သုတ်သုတ် သုတ်သုတ်
နဲ့ လူတယောက်ဟာ ကျမ ညာဘက် ပုခုံးစွန်းကို ပွတ်တိုက်၊ ကျမရှေ့ ကျော်တက်ပြီး
လျှောက်သွားရော၊ ဆောလည်း မဆောရီးသွားဘူး၊ ကျမလည်းပါးစပ်မှာ ပေကျံသွားတဲ့
အချဉ်ကို တစ်ရှုးနဲ့သုတ်ရင်း ဒီလူ့နှယ် သူ့မိန်းမ မီးဖွားလို့များ ဒီလောက် ရေးကြီးသုတ်
ပြာ ဖြစ်နေရသလားလို့ စိတ်ထဲက ဘုတောပစ်လိုက်မိတယ်။
သူ့ကြည့်လိုက်တော့ သူက အမှိုက်ပုံး ၃လုံးရှေ့ ရပ်ပြီး လွယ်ထားတဲ့ အိတ်ထဲက ကြွပ်
ကြွပ်အိတ် တလုံးကိုထုတ်တယ်၊ ပြီးမှ လွှင့်ပစ်စရာတွေကို စက္ကူဆိုရင် စက္ကူ ပစ်ဖို့ ပုံး၊
ပလပ်စတစ်ဆိုရင် ပလပ်စတစ် ပစ်ဖို့ ပုံး၊ Can ကန်ဗူးဆိုရင် ကန်ဗူး ပစ်ဖို့ပုံးထဲကို အ
သေအချာ ခွဲခြားပြီးထည့်နေ တော့တာကိုး။ ဒါနဲ့ပဲ ခုနက စိတ်တိုသွားတာလေး ပျောက်
ပြီး ကိုနိူင်ငံကြီးသားကို စိတ်ထဲက ချီးကျူးမိပြန်တယ်။ ကျမလည်း သူ့နား ခပ်လှမ်းလှမ်း
မှာ ရပ်ရင်း ဖစ်ရ်ှဘောလ်က ဗိုက်ထဲရောက်သွားပြီး ကျန်နေတဲ့ တုတ်ချောင်းကို ပစ်ဖို့
ဒါကို ကိုနိူင်ငံကြီးသားက သတိထားမိပုံနဲ့ ကျမဘက် လှမ်းကြည့်ရင်းသူ့ကိုယ်ကို ဘေး
နဲနဲကပ်ပေးတယ်။ လာပစ်လေ ဆိုတဲ့သဘော။ ပြီးတော့ ကျမဘက် တချက် စိုက်ကြည့်
အို.....လူ များ သစ်ပင်မှတ်လို့ စိုက်ကြည့်စရာလား...
ဒါနဲ့ပဲ Paper, Plastic, Can ဆိုတဲ့ အမှိုက်ပုံး ၃ပုံးထဲက တပုံးပုံးထဲကို နံကြားထောက်
ရွေးရင်း နိူင်ငံကြီးသမီး ပီသစွာ ပြီးပြီးရော ပစ်ခဲ့လိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ်လေ...ဖစ်ရှ်
ဘောလ် တုတ်ချောင်းပစ်ရန်လို့ ဘယ်ပုံးမှာမှ ရေးမထားဘူး...။
ရုံးရောက်တော့မှ နောက်ခုံက ကောင်မလေး ပြောပြလို့ ကျမ ဂျင်းန်ဘောင်းဘီ အသစ်
ကြီး စတစ်ကာ မခွာပဲ ဝတ်လာမိတာကိုး...ဂျင်းန်ဘောင်းဘီရဲ့ အရှေ့ပေါင်ပေါ်မှာ
W-28, L-32 လို့ ကပ်ထားတဲ့ ဒေါင်လိုက် စတစ်ကာလေး မြင်ဖူးကြမှာပေါ့။
တကယ်တော့ ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းက ခုမှရောက်တာ၊ ရီဆိုင်ကယ်တို့၊ အဟောင်းကို
တနေရာရာမှာ ပြန်သုံးတာတို့ အဲဒါမျိုးတွေက ခေတ်စားနေတာ ကြာလှပေါ့။
သီချင်းဟောင်းတွေ ပြန်ဆို၊ ဇာတ်ကား အဟောင်းတွေ ပြန်ရိုက်၊ လဗိုက်စ် ကတောင်
ဂျင်းန်အဟောင်းတွေ နဲ့ သူ့ဆိုင်က အသစ်နဲ့ လဲရင် အသစ်အတွက် ၅၀ လျှော့ပေးတာ
တို့၊ တချို့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ ဆိုလည်း ထရိတ်အင် လုပ်လို့ရတာမျိုးတွေ...စုံလို့ပေါ့။
ဒါဟာ တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်ပါ ကမ္ဘာမြေကြီးကို ထိန်းသိမ်းရာ ရောက်
တယ်လေ...လိုအပ်နေသေးတဲ့၊ အသုံးတည့်နေသေးတဲ့ အဟောင်းတွေကို စွန့်မပစ်သင့်
ကျမ စာရေးနေတုန်း အိမ်ကလူကြီးက စာရွက်ပိုင်းလေးတခု လာပြတယ်။ စင်တယ်လ်
Road Show မှာ ဖုန်းအဟောင်းတွေ ဈေးကောင်းပေးပြီး အသစ်နဲ့လဲလို့ရတဲ့ အကြောင်း
ဒါတင်ပဲဆိုရင် ပြဿနာ မဟုတ်သေးဘူး။ သူက ပြောသေးတာ၊ဖုန်းတွေကျတော့ ဟောင်း
သွားရင် ထရိတ်အင် လုပ်လို့ရတယ်နော် တဲ့...ကြည့် ဒါက...။ ကျမ မျက်နှာကို ကြည့်
သေးတာ...ဘာသဘောတုန်း..။ ထရိတ်အင် လုပ်လို့ရရင် ကျမကိုပါ လဲတော့မယ့် ပုံ
လိုလို...အေးလေ...စိတ်လျှော့လိုက်ပါတယ်။ ကျမ ဒီလောက် နှိပ်စက်တာ၊ ဆိုးတာ
နောက်ဆုံးတော့ ထရိတ်အင် အော့ပ်ရှင် မရှိတော့တဲ့ အခါ.......
ကားလောကမှာ ကားသမားစကားနဲ့ ပြောရရင် ကားအသစ်လည်း မဝယ်နိူင်၊ လဲလို့လည်း
မရတဲ့နောက် ရှိတဲ့ ကားအဟောင်းကြီးပဲ ဆေးမှုတ်တန်မှုတ်၊ ဘော်ဒီလေး ဘာလေး ထု
သင့်တာထုပြီး ဖြစ်အောင် သုံးနေရတော့တာပါပဲကွာ တဲ့။ သူ ဒါတွေ အတုယူသင့်တယ်...
ကိုင်း...လောကမှာ သုံးတတ်၊ မြင်တတ်ရင် ကောင်းနေသေးတဲ့ အဟောင်းတွေမှ အများကြီး...
Labels: ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး
Vista Tue Mar 16, 08:59:00 PM GMT+8
အမျိူးသမီးဂျီးဒွေကို တောင်မရေးဒွေနဲ့ထရိတ်အင်လုပ်တဲ့ ဆားဗစ်ထောင်မို့ 
အကိုတို့ လို အကိုဂျီးတွေ အုံနေမှာမြင်ယောင်သေးဟေးဟေး ။ Q တန်းကိုတော်တော် ရှည်မှာ ။ဟိဟိ။
ဇောင်း Tue Mar 16, 09:32:00 PM GMT+8
အစ်မရေ နောက်ဆို ဘောင်းဘီအသစ်ဝတ်ရင် သတိထားတော့နော်၊ တံဆိပ်မဖြုတ်မိပဲဝတ်ရင် ရာဇာနေ၀င်းမဟုတ်ပဲ ရာဇာချစ်ကြည်အေး ဖြစ်နေမယ်.... :P
khin oo may Tue Mar 16, 09:34:00 PM GMT+8
ကိုဇော် Tue Mar 16, 10:01:00 PM GMT+8
မီးလေး လာတုန်း .... :P
ကိုဇော် Tue Mar 16, 10:15:00 PM GMT+8
ချစ်မကြီး ကို အချက် ၂ ချက်ကြောင့် တင်းသွားပြီ...
ကောက်မယ်..ကွေးမယ်...ထွန့်ထွန့်လူးမယ်. . .ကျွမ်းထိုးမယ်. . .
၁)အနော် ရေးမလို့ဟာ ရီဆိုင်ကယ်ကို ရေးသွားတယ် . .
ဒါကြောင့် အနော်က ရေးရင် ရီစက်ဘီး ပဲ ပြောင်းရေးရတော့မှာပေါ့။
၂) Tag ထားတဲ့ စာ လာမဖတ်ဘူး....ဗြဲ. . .။
အဟီး . .အခုမှ ပို့စ်ကို မန့်ပြီး ကြပ်မယ်။
ချစ်ကိုကြီးကလဲ ဖုန်းဆိုတာ ကာဗာလဲထားလိုက်ရင် အထဲမှာ ဘာ ဆိုတာ သေချာ မြင်ရတာ မဟုတ်ဘူး။ ချစ်မကြီးကျတော့ ကာဗာပဲ လဲလဲ ၊ ဘာပဲ လဲလဲ ဒီလိုက ဒီလိုပဲလေ. . စိတ်ဓါတ်လေး ကောင်းတာကို ပြောပါတယ်။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ချစ်ကိုကြီးကို တစ်ခု မေးရဦးမယ်။
W-28 ဆိုတာကိုလေ. . .2 နဲ့3က ကပ်လျှက်မဟုတ်လား။
မှားများ ထိမိသွားတာလားလို့ပါ. . ခွိခွိ..။
မြစ်ကျိုးအင်း Tue Mar 16, 11:46:00 PM GMT+8
အဟောင်းဒွေ ပဲလှော်နဲ့လဲဒယ် ...။
ကိုလူထွေး Wed Mar 17, 02:18:00 AM GMT+8
W32 L28 ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ ဟှင်...
အင်ကြင်းသန့် Wed Mar 17, 06:33:00 AM GMT+8
မမရေ...တစ်ချို့ပစ္စည်းဟောင်းတွေများဆိုရင် တန်ဖိုးများလွန်းလို့ ဈေးကလိုက်လို့တောင်မမီဘူး...စိတ်မပူပါနဲ့ မမရဲ့ချစ်ချစ်က မမတန်ဖိုးကို သိမှာပါ...
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Wed Mar 17, 08:11:00 AM GMT+8
SHWE ZIN U Wed Mar 17, 10:23:00 AM GMT+8
အိမ်က အဟောင်းတွေ အကောင်းအသစ် တွေနဲ့ ပြန်လဲချင်သား
Anonymous Wed Mar 17, 10:41:00 AM GMT+8
အသစ် ဘယ်လိုကောင်းကောင်း အဟောင်းတလည်လည်နော
အသစ်တိုင်းမကောင်းတာတွေ အများကြီးပဲ ဖိနပ်ဆိုရင် အသစ်စီးလို့ မကောင်း ဂျင်းတွေလည်း ဒီလိုပါဘဲ
ဇွန်မိုးစက် Wed Mar 17, 11:10:00 AM GMT+8
အသစ်တွေဘယ်လိုကောင်းကောင်း အဟောင်းကိုတော့ တလည်လည်ပါပဲ အစ်မချစ်ရေ....။ ;)
Anonymous Wed Mar 17, 11:20:00 AM GMT+8
အို..ဒေါ်စည်းစိမ်ရယ်။ ဖိနပ်မပေါက်အောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဖိနပ်ကို စတိကိုက်လိုက်ရင် ဖိနပ်မပေါက်တော့ဘူး။ အသစ်နဲ့ အဟောင်းသာလဲလို့ရစမ်းဘာ။ ဖိနပ်အဟောင်းကစီးရတာ ဘတ်လတ်..ဘတ်လတ်နဲ့။ အသစ်ကမှ တင်းတင်းရင်းရင်းအသားကျတာဗျ။ ဟဲ...ဟဲ ဂျီးဒေါ်ချစ်ကြည်ရေ...အစ်ကိုကြီးကို စကားလက်ဆောင်ပါးလိုက်ဦးနော်။
မောင်ဘကြိုင် Wed Mar 17, 12:21:00 PM GMT+8
rose of sharon Wed Mar 17, 02:54:00 PM GMT+8
အဟောင်းတွေဘဲကောင်းပါတယ်... အသားကျပြီးသားလေ... :)
TZA Wed Mar 17, 10:29:00 PM GMT+8
T T Sweet Thu Mar 18, 06:23:00 AM GMT+8
ဒီသူငယ်ချင်းတွေ ဘာဖြစ်နေကြလဲ .... အန်တီသက်ဝေကလည်း အမှိုက်ပုံးထဲ ပစ်မှာကြောက် ... ဒီတစ်ယောက်ကလည်း ထရိတ်အင် လုပ်မှာကြောက်နဲ့ ... ဟွင်းဟွင်း ... များတို့တော့ ဒါတွေ မကြောက်ပေါင်။ က်ုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ဘော်ဒီထု၊ ဆေးပြန်မှုတ် လုပ်ပလိုက်တယ် ...
ရွာသားရေ ... လူတစ်ယောက်လုံး အမှိုက်ပုံးထဲ ပစ်ချနည်းပြီးရင် လူတစ်ယောက်လုံး ထရိတ်အင်လုပ်နည်းလေးဘာလေး မရှိဘူးလား ... ဟား ဟား။
ဏီလင်းညို Thu Mar 18, 08:48:00 AM GMT+8
Moe Cho Thinn Thu Mar 18, 09:01:00 AM GMT+8
ဆေးမှုတ်ရင်တော့ ငါ့အမ ကာလာဖူးလ် ဖြစ်နေရော့မယ်..
(မမရေ လာဆုတောင်းတဲ့အတွက် ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ၊ ဘလော့ကို ခုမှ ရောက်လို့ပါ။)
လုလု Thu Mar 18, 10:44:00 AM GMT+8
ရာဇာချစ်ကြည်အေးတဲ့လာ့း့့  ရီလိုက်ရတာ မ ရယ်
မြသွေးနီ Thu Mar 18, 02:20:00 PM GMT+8
ညစ်နေချိန်မှာ အစ်မပို့စ်ဖတ်ပြီး ရယ်ခွင့်ရသွားပါတယ်။
sosegado Fri Mar 19, 09:34:00 PM GMT+8
ဟောင်းနေပြီလို့ ဘယ်တော့မှ မထင်မိစေနဲ့၊ ကောင်းနေသည်လို့ပဲ မှတ်ပါ၊ ..။..
Ko Boyz Sat Mar 20, 07:12:00 PM GMT+8
၂၈ နဲ့ ဝတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ပြောနေတာဟာ ကျန်တဲ့ ၃၀ကျော် အမျိုးသမီးထုများကို ကော်စားလိုက်တာပဲလို့ ကိုယ်ထင်တယ်။
ချစ်ကြည်အေး Sat Mar 20, 07:22:00 PM GMT+8
အားလုံးသော သူငယ်ချင်းများ ကျေးဇူးပါနော်....:)
Boyz...ကိုယ်က အရင်က ၂၅ကိုး....ကိုယ့်လစ်မစ် နဲ့ ကိုယ်တော့ ဟုတ်တယ်လေ ၊ ဒါထက် ကိုဘွိုက် မတဲ့ အချွန်က နဲနဲ တုံးသလိုပဲနော်....ချွန်စက်ဝယ်ရန် စာရင်းတို့ထားပါ....:)
တီဇီးအာ...ဒီပိုစ့်က ဒရပ်ဖ်ထဲမှာ Feb ထဲက ရှိနေပြီး ခုမှ ပေါင်ဒါလေး နဲနဲပါးပါး ပုတ်ပြီး ကန်တင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်မို့လို့ပါ...အင်ဖို အပ်တူဒိတ် မဖြစ်တဲ့ အတွက် ဆော်တီး...:)
ပုံရိပ် Sat Mar 20, 11:26:00 PM GMT+8
ကောင်းနေသေးသာ အဟောင်းများ...။ အိမ်ကလူလည်း ပါတယ်။ :)
Anonymous Sun Mar 21, 02:09:00 AM GMT+8
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ် Mon Mar 22, 10:11:00 AM GMT+8
အခုလို မြူးမြူးကြွကြွ ခပ်သွက်သွက် ရေးတာမျိုး အရမ်းကြိုက်တယ်ဗျာ... ရယ်စရာ ဖြစ်မယ့် အကြောင်းကလည်း တကယ့်ကို ရယ်စရာပါပဲ...
သိပ်ကောင်းတယ်.. မပြုံးပဲကို မနေနိုင်ဘူး...း))
စကားမစပ်... ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်လေးပါလားဗျ..း)
ပလာတာ နဲ့ ပဲပြုတ်
အသိတရား ရဲ့ အရောင်...
ကျမ ရင်ထဲက အတွေးစများ...
သူ့အကြိုက် (သို့မဟုတ်) ကျမ ချက် မိ....( အပြီး)
သူ့အကြိုက် (သို့မဟုတ်) ကျမ ချက် မိ....(အပိုင်း ၁)
က ကတစ်ငါးပေါင်း - ဒီတခါတော့ ဗီယက်နမ်ဈေးက ဝယ်လာတဲ့ ကကတစ်ငါးလေေးတွကို ဘာလုပ်စားရရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားနေရင်းက စိတ်ထဲပေါ်လာတာတွေ ချက်ဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ ထမင်းစားလ...
မရွာနဲ့ဦးမိုး..... - မိုးရာသီအစမှာ ပထမဆုံးတင်ဖြစ်တဲ့ သီချင်းလေးက “မရွာနဲ့ဦးမိုး” ဆိုတော့ အပူချိန်မြင့်ပြီး မိုးခေါင်တဲ့ ဒီနှစ်အတွက် အတိတ်နိမိတ်များဖြစ်သွားမလား စိုးရိမ်မိခ...
ရင်ဘတ်ထဲကလူ (အက်ဆေး -၃) - သူ့ရဲ့နာမည်လေးက ကျမကို စိုးမိုးသွားခဲ့တာပါပဲ... သိပ်လှတဲ့နာမည်လေးလည်း မဟုတ်ပါပဲ.. စိတ်ဝင်စားမိတာကိုက သူနဲ့ကျမ အတိတ်ဘဝက ရေစက်ပေပဲလား သူ ကျမကို မသိခင်...